Otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes | Nyefee Songs ka iTunes si iPod ịkpọgharịa
Enwere ụzọ nyefee music na m iPod ịkpọgharịa Jen 3 ka iTunes na kọmputa m? Ụjọ na-atụ m na-agbalị syncing n'ihi na m na-eche bụ a agbara usoro ebe music na iTunes na-agafere ka iPod. Achọghị m ka m ihichapu music na iPod. Ekele.
Chọrọ nyefee music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes mgbe adịkwa gị iTunes n'ọbá akwụkwọ? Bu n'obi na-ndabere music on iPodc ịkpọgharịa ka iTunes? Otú ọ dị, dị ka otu ụzọ na-omume, iTunes naanị syncs music gị iPod ịkpọgharịa. Ọ nwere ike na ime ihe ọ bụla nyefee music na gị iPod na ya.
Na nke a, m ukwuu nwere ike ikwu na ị na-eji ihe dị mfe na-eji ma dị ike iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Na ya, ị na-enwe ike nyefee niile ma ọ bụ họrọ songs si iPod ịkpọgharịa ka iTunes ọsọ ọsọ na mfe. E wezụga na-ebufe music, ị nwekwara ike iṅomi fim, listi ọkpụkpọ, Podcast, TV show, music vidio, na akwụkwọ ọdịyo gị iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ka mma. Ke adianade do, niile music kwukwara na mbụ ga-ewepụ n'oge music nyefe.
Pịa "Download" button ibudata Wondershare TunesGo na kọmputa gị.
Mfe nzọụkwụ idetuo music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes
N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ banyere ebufe music faịlụ na listi ọkpụkpọ site na iPod ịkpọgharịa ka iTunes. Ugbu a, ka lelee ha.
Nzọụkwụ 1. Run a usoro na jikọọ na iPod ịkpọgharịa na PC
Nke mbụ niile, wụnye na mgbe ahụ na-agba ọsọ a iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ na PC gị. Ọ bụrụ na ị wụnye iTunes na kọmputa gị, a usoro ga-echetara gị wụnye ya. N'ihi ya, na nke a, ị kwesịrị ị na wụnye iTunes na kọmputa gị.
Mgbe ahụ, jikọọ gị iPod ịkpọgharịa gị na kọmputa site na eriri USB. Nke a na usoro ga-chọpụta gị iPod ịkpọgharịa ozugbo. Mgbe ahụ, isi interface ga-emere gị na PC na ihuenyo. Site n'aka ekpe kọlụm nke a isi interface, ị nwere ike ịlele ọdịnaya na gị iPod ịkpọgharịa.
Nzọụkwụ 2. Paghaa music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes
Ka mmekọrịta music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes, ị nwere ike pịa "Iji iTunes"> "Malite" na ala akara na isi interface. Mgbe ahụ, wepụ akara tupu ndị ọzọ media ma e wezụga n'ihi music na listi ọkpụkpọ. Pịa "Detuo na iTunes". Ọ ga-agafe songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod ịkpọgharịa 4, iPod ịkpọgharịa 3, iPod ịkpọgharịa 2, na iPod ịkpọgharịa 1.
I nwekwara ike ịkpali songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ n'ụzọ ọzọ. Na ekpe kọlụm, ị kwesịrị ị na pịa "Media". Mgbe ahụ media window ga-egosipụta na nri. Họrọ gị chọrọ songs. Mgbe ahụ, pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka". Mgbe esiri-ala ndepụta Pop elu, ị ga-ahọrọ "Mbupụ na iTunes Library".
Ma ọ bụ i nwere ike na pịa "Smart Mbupụ na iTunes". Nke a na-eme ka i si exporting otu songs ka iTunes ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iṅomi listi ọkpụkpọ azụ iTunes Ọbá akwụkwọ, yuo nwere ike pịa "Playlist". Mgbe na-ahọpụta ọkacha mmasị gị listi ọkpụkpọ, ị kwesịrị pịa triangle n'okpuru "Export ka". Họrọ "Mbupụ na iTunes Library".
Video nkuzi maka otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes
Nkuzi nyefee iTunes listi ọkpụkpọ iji New Computer
> Resource> iTunes> otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes